[OFISIALY] dr.fone - iOS System Recovery: Fix iOS amin'ny ara-dalàna
Manamboatra ny rafitra iOS olana ao an-trano
Ihany no manamboatra ny iOS ho ara-dalàna, tsy misy rakitra very mihitsy.
Miasa ho modely rehetra ny iPhone, iPad sy iPod mikasika.
dr.fone Toolkit - iOS System Recovery mamela anao manamboatra ny iOS hiverina amin'ny ara-dalàna ny tenanao ao an-trano.
Raha ny iPhone na iPad niraikitra tao famerenana fomba na fotsy Apple Logo, ny zavatra toy izany, ny fomba sitrana ankapobeny ho an'ny iPhone / iPad dia iTunes hamerenana amin'ny laoniny. Lehibe raha efa nanao ny nomaniny ho solon'izay, ary mampalahelo raha tsy. Izany no antony dr.fone Toolkit - iOS System Recovery mivoaka. Afaka manamboatra mora foana na karazana rafitra iOS olana sy hahazo ny fitaovana hiverina amin'ny ara-dalàna. Zava-dehibe ny ankamaroany, dia afaka hiatrehana izany ny tenanao ao anatin'ny latsaky ny 10 minitra, ka tsy ho very na tahirin-kevitra.
Nahoana iOS System Recovery?
dr.fone Toolkit - iOS System Recovery mahatonga anao ho afaka manamboatra iOS olana ho an'ny maro ny tranga iombonana.
iPhone / iPad niraikitra tao famerenana fomba iTunes manome fitoerana na logo.
iPhone / iPad tsy afa-nivoaka ny DFU fomba.
iPhone / iPad mivadika ho fotsy Apple Logo lamba / fotsy lamba ny fahafatesana.
iPhone / iPad lasa lamba mainty, mena na manga efijery.
iPhone / iPad restarts hiaina mandrakizay isika.
iPhone / iPad toa malalaka, ary tsy mamaly mihitsy.
iPhone / iPad dia tsy solafaka ny hamaha na tsary eo amin'ny fitondrana intsony.
iPhone / iPad foana looping amin'ny Apple logo.
More toe-javatra toy izany.
Fix iOS amin'ny ara-dalàna ao an-tokantrano
Afaka manamboatra ny iOS olana irery, fa tsy nampitondrainy izany ho any hanamboarana fivarotana amin'ny bunch ny vola ary ny mety ny fiainany manokana.
IOS sitrana System avy amin'ny toe-javatra samihafa
Fix ny iOS amin'ny ara-dalàna avy amin'ny mainty efijery, fomba famerenana, lamba fotsy ny fahafatesana sy ny maro hafa.
Fix iOS amin'ny ara-dalàna tsy misy Data Loss
Tsy toy ny iTunes na iCoud indray, ity tontolo iOS rindrambaiko fanarenana dia tsy hanova na tahirin-kevitra eo amin'ny fitaovana. Rehefa mahazo miverina amin'ny ara-dalàna. Mitoetra ny zava-drehetra.
Na inona na ianao mampiasa ny farany iPhone 7, iPad Pro, na ny taloha 4 iPhone, iPad 1, io antontan-kevitra iPhone fanarenana tanteraka rehetra mifanaraka amin'ny ohatra ny iPhone, iPad sy iPod mikasika.
Dia tsy mangalatra, fiovana na mandefa ny angona momba ny fitaovana, na jailbreak ny fitaovana. Rehetra izany no mahazo ny tapaka dia fitaovana ara-dalàna indray.
Aza manahy mikasika ny mety ho Data Loss
Ny fampitahana ny iTunes hamerina amin'ny laoniny na fomba hafa izay afaka manamboatra ny rafitra iOS olana, amin'ny fampiasana dr.fone Toolkit - iOS System Recovery dia tsy hametraka anao mety ho very tahirin-kevitra sy toe-javatra eo amin'ny iPhone, iPad na iPod mikasika. Ny tokony atao dia hatao ny fitaovana mifandray ary handroso miaraka amin vitsivitsy kitika. Ary nanao ny zava-drehetra dia hahazo ao anatin'ny minitra vitsy. Na inona na inona ny fitaovana very na niova. Izany no ody izay dr.fone Toolkit - iOS System Recovery no.
Fix ny iOS olana mba haka azy indray ny ara-dalàna.
Tsy misy olona afaka mampiasa ny tahirin-kevitra sy tantara, fa ianareo.
Ny olona rehetra amin'ny solosaina Afaka mampiasa azy io.
Tsy hanisy ratsy ny tahirin-kevitra momba ny fitaovana mihitsy.
iOS System Recovery Works ho an'ny iOS rehetra Fitaovana
Misaotra be dia be ny manamboatra ny findaiko izay ny fahafatesana.
BEST PRODUCT HATRANY
dr.fone manampy ahy ho voafafa indray ny sary. Io no fandaharana tsara. I torohevitra ny olona rehetra hampiasa izany fandaharana raha mamafa fanazavana ilaina.
Zava-mahagaga izay manampy be dia be ny sasany rehefa mamafa stupidly zavatra ilainao
Ahoana no manamboatra White Screen ny Fahafatesana
Full Solutions manamboatra Error 9 Rehefa Upgrade ny iPhone
Meet iPhone Error 14? Mora mahazo izany Hifantohan'ny Now!
Ahoana no manamboatra iPhone nifikitra tamin'ny "Connect ny iTunes"
Ahoana no manamboatra fahadisoana 53
Major olana amin'ny iPhone 6 sy Ahoana no manamboatra Azy Ireo
Ahoana no manamboatra iPhone Error 4013/4014 Nandritra iOS Update
Full Solutions manamboatra iPhone Error 3194
Ahoana no Fix iPhone Error 29